Dadka British-ka ee u codeeyey Brexit, ma waxay hadda taaagan yihiin shaleyto?… – Hagaag.com
Dadka British-ka ee u codeeyey Brexit, ma waxay hadda taaagan yihiin shaleyto?…
Sida muuqata Fikradii aheyd in la qaado afti labaad ee Britain ay ugu baxeyso Midowga Yurub ayaa markii hore loo arkay mid aan caqliga geli karin, laakin hadda waxay u muuqataa in dad badan ay qabaan fikradaasi in lagu celiyo walow ay jirto kala duwanaanshiyo labada garab ee kuwa taageersan Brexit iyo kuwa ka soo horjeeda.
Falanqeeyayaasha ayaa waxay aaminsan yihiin in heshiiska ay isla gaareen Rai’iisul wasaaraha Britain Theresa May iyo Midowga Yurub la filayaa in uu ku fashilmi doono aqalka Baarlamaanka bishan 11da, laakin sidoo kale waxay u arkaan in afti labaad la qaado ay noqoneyso caqabad weyn.
May ayaa dagaal kula jirta waqtiga sidii ay ugu qancin laheyd xubnaha weli shakiga ku jira oo aan qaadan go’aan, waayo waxay u aragtaa “heshiiska ay wada gaareen Ingriiska iyo Midowga Yurub uu yahay kan ugu fiican ama kan keliya suurta galka ah”.
Waqtigan xaadirka ah ayaa u muuqata mid aad uga fog cododka loo baahan yahay ee in lagu meel mariyo sharcigan, wuxuu wajahayaa mucaarado xoog leh dhinacyada kooxaha taageersan Brexit iyaga oo cabsi ka qaba xiriir aan koobneyn inuu dhex maro Britain iyo Midowga Yurub, iyo kuwa ka soo horjeeda oo aan u arkin wax maslaxad ah ka bixitaanka Midowga Yurub.
Dhacdooyinka iyo tilmaamayaasha
Waxaa socda dalabaad lagu doonayo in mar kale la qabto afti labaad, u dhaqdhaqaaqayaasha British-ka ee taageersan afti labaad ayaa gacanta u gelin doona maalinta Arbacada xafiiska Rai’iisul wasaaraha warqad ay ku saxiixan yihiin malyuun qof.
Ra’yi ururin nooceeda middii ugu weyneed ayaa dadka British-ka ay Haa ugu codeeyeen ka mid ahaanshaha Midowga Yurub 54% marka loo barbar dhigo 46%, haddi la qaadi lahaa afti labaad ee Britain uga baxeyso Midowga. Waxaa ra’yi ururinta ka qeyb galay 20 kun oo British ah, waxaana la qaaday 20kii October ilaa 2dii November, waxaana qaaday wakaalada Survation.
Waxaa xusid mudan in dad gaarayo 700 kun oo ay isugu soo baxeen bartamaha London bishii October 20da oo ka soo horjeeday ka bixitaanka Yurub, waxaa sidoo kale ra’yi ururin kale oo la daabacay isbuucan ay muujisay in 48% ay rabaan in la qabto afti cusub halka 34% ay ka soo horjeedo, waxaa qaaday ra’yi ururinta wargeyska The Daily Mail.